सिस्नो | मझेरी डट कम
kbs — Sat, 02/21/2009 - 13:41
बिहानको ठीक सात बजे भनेको तर आठ बजे सहिदगेटबाट एक हप्ताको लागि "नारी कानुनी साक्षरता" तालिमको निम्ति हाम्रो समूह वातानुकूलित सुविधा सम्पन्न विदेश वसमा नगरकोट हुँदै शिवपुरी डाँडातिर लाग्यो ।
हामी हाम्रो देशका पहाडका श्रृङ्खला, खोलानाला, चाँदीजस्ता हिमशिखर आदिका प्रकृतिक सुन्दरताको अवलोकन गर्दै घर-व्यवहारको तनावलाई बिर्सिदै गइरहेका थियौं । दुई-तीन घण्टाको यात्रापछि सुन्दर हरियो पहाड र जङ्गलले हामीलाई स्वागत गरिरहेको ठाउँमा पुग्यौँ ।
बैशाख महिनाको मध्यदिनमा पनि त्यहाँ सिरसिर चिसो हावा चलेको थियो जसको र्स्पर्शले हाम्रो तनमनलाई शीतल र आनन्दित तुल्याइदियो । हामीलाई एउटा कोलाहलपूर्ण दुर्गन्धित वातावरणबाट एकैचोटी र्स्वर्गमा पुगेजस्तो अनुभव भयो ।
त्यहाँ हामीलाई गा.वि.स.का अध्यक्ष र केही शिक्षकहरूले जङ्गली फूलका गुच्छा दिएर स्वागत गरे । हामीलाई अध्यक्षले आफ्नो घर नजिकको चौरमा टहराजस्तो ढड्डीले बनाएको, आकर्ष परालले छाएको एउटा छाप्रोमा लगे ।
भुइँमा टम्म पारेर काठमा फल्याक ओछ्याइएको थियो । त्यसमाथि आधुनिक कार्पेट आछ्याइएको थियो । एउटा कुनामा डनलपका ओछ्यान, सिरानी, तन्ना र सिरकलाई चाङ मिलाएर राखिएको थियो ।
झ्यालबाट र्सर्रर हावा आइरहेको थियो । त्यहाँबाट वनजङ्गलको प्राकृतिक दृष्य र मध्यदिनको घाममा मोतीजस्ता टल्किरहेका हिमश्रृङ्खलाहरू प्रष्टै देखिन्थे ।
हामी सबैजनाले आ-आफ्ना झोला बिर्साई आराम गर्यौँ ।
त्यसपछि हामी हातमुख धोएर फ्रेश हुन प्राकृतिक पानी बगिरहेको पँधेरोतिर गयौँ जहाँ पँधेरोसँगै आधुनिक तरिकाबाट परालले छाएको नुहाउने बाथरुम पनि थियो । अर्को सँगैको कोठामा आधुनिक किसिमबाट बनाइएको कमोड राखिएको शौचालय रहेछ ।
हामीले यात्राको शारीरिक थकानलाई केही छिन आराम गरी मेटायौँ । हामीलाई केही समयपछि लञ्च खानको लागि बोलाइयो । त्यहीँको चिसो पानीको मसिनो चामलको भात, पहाडी कुखुराको मासु, त्यहीँ पाइने बोडीको दाल, ताजा सागो तरकारी, शुद्ध घ्यू,, दही जस्ता धेरै परिकारका खाना अति मीठो मानी स्वाद लिईलिई खायौँ ।
सहरका अनेक रासायनिक मलबाट कृत्रिम रूपले उब्जाइएको खाँदाखाँदा वाक्क भइरहेका हामीहरूलाई त्यस्तो खाना, चौरासी व्यञ्जनभन्दा मीठो लाग्यो । केहीक्षणपछि हामी तालिम दिइने ठाउँ निरीक्षण गर्न गयौँ । त्यसबेला हामीलाई रमाइलो गोधुलीको प्रकृति अवलोकन गरेजस्तो लाग्यो ।
हामीले भोलिपल्ट बिहान एघार बजेदेखि चारबजेसम्म एक हप्ताको तालिम दिने कार्यक्रमको सूची यार पार्यौँ । तालिमका उद्देश्यहरूमा महिलालाई संविधानमा भएका अधिकार र कर्तव्यबारे जानकारी गराउने, महिला -पुरुष बीच समान अधिकारबारे जानकारी दिने, महिलालाई सम्पत्तिको अधकिारबारे बताउने र सबै किसिमका शोषणविरुद्ध सक्रिय बनाउने, नारी चेतना जगाउने आदि थिए । यिनै विषयमा छलफल गर्नुथियो ।
भोलिपल्ट बिहान हामी कार्यक्रम स्थलतिर गइरहेका थियौँ, मेरा आँखा सात-आठ महिनाको बच्चा पिठ्यूँमा बोकी चिम्टाले सिस्नो टिपिरहेकी एउटी महिलामा परे । मेरो मुखबाट प्याच्च निस्कियो - "सिस्नोको तिहुन असाध्यै मीठो र फइदा गर्ने हुन्छ भनेको सुनेकी थिएँ ।"
मेरो कुरा सुनी अध्यक्षले भने - तपाइँहरूलाई खान मन लागेको छ भने भोलि नै सिस्नु टिपी तिहुन बनाउन लगाउनेछु ।"
साँच्चै भोलिपल्ट बिहानको खानामा अध्यक्षकी श्रीमतीले असाध्यै मीठो सिस्नोको तिहुन बनाएर ख्वाइन् । सबैले अति मीठो मानी थपीथपी खाए ।
तालिम अवधिमा भातसँग कहिले पहाडी बोकाको मासु, कहिले बँदेलको मासु त कहिले जङ्गली कालिजको मासुसहित शुद्ध दूध, घ्यू, भातदाल र सागसब्जीसँग मीठो खानाको खुब स्वाद लियौँ । एक हप्तापछि हाम्रो कार्यक्रम रमाइलोसँग र सफलतापूर्वक सकियो ।
तालिम सकिएपछि हामी स्वच्छ वातावरणबाट फेरि दूषित ठाऊतिर फर्किन बाध्य थियौँ । तालिम अवधिको हप्ता हामीलाई कुनै पाँचतारे होटलको भ्रमणमा बिताएजस्तो लाग्यो ।
साँच्चै भनुँ भने हामी घरका सबै तनावबाट मुक्त भएका थियौँ । त्यहाँका गाउँलेको आतिथ्य, सेवा-सत्कार देखि हामी धेरै प्रभावित भयौँ । स्वच्छ, शान्त प्राकृतिक वातावरणमा हामीले आफ्ना सबै दुःख बिर्सेंका थियौँ ।
त्यस कार्यक्रममा सहभागी हामी सबै महिलाहरू शिक्षित। सम्पन्न, ठूलाबडा ओहदाका व्यक्तिका श्रीमतीहरू थियौँ । हामी सबैका घरमा अनेक आधुनिक सुखसुविधयुक्त वातावरण भए पनि त्यहाँको प्राकृतिक वातावरणबाट हामी सबै मोहित भएका थियौँ । थोरै दिनहरूको सुखद अनुभव बटुली हामी फर्किन गाडीमा चढ्यौँ । अध्यक्ष लगायत त्यहाँका सबै सहभागी गाउँले महिलाहरूका साथै हरिया पहाड र जङ्गलले पनि हामीहरूलाई अन्तिम अभिवादन गरी बिदा दिए । गाडी विस्तारै गुड्यो ।
आधा घण्टा अगाडि बढेपछि मेरा आँखा अचानक त्यही पिठ्यूँमा बच्चा बोकीएउटा ठूलो ढुङ्गामाथि बसेकी पसनाले निथु्रक्क भिजेकी महिलामा परे, जसलाई हाम्रो यात्राको पहिलो दिन पनि मैले त्यस भेकमा देखेकी थिएँ । भोकप्यासले उसका ओठहरू कलेटी परेका थिए र ऊ सिकुटे बच्चालाई आफ्ना सेप्रिएका दूधका लाम्टा चुसाइरहैकी थिई ।
यसो घडी हेछु, दिनको बाह्र बजिसकेको रहेछ । यी महिला हिडेर कुनबेला घर फर्किने हुन् - कुनबेला सिस्नोको तिहुन पकाएर खाने हुन - कति भोक लागेको होला - मलाई यी महिलाको साह्रै माया लागेर आयो ।
हामी त्यहाँ महिला विकास समितिबाट हजारौँ रूपैयाँ खच गरेर गएका थियौँ । हठात् मलाई लाग्यो, हामीले अन्जानमा गरिब महिलाहरूको छाक नै हरेका रहेछौँ ! मैले स्वाद मानी खाएको सिस्नोको तिहुन अकास्मात तीतो अनुभाव भयो । महिला शोषणका विरोधमा त्यहाँका महिलालाई चेतना दिन पुगेका थियौँ हामी, सायद उल्टो हामीबाट नै उनीहरू शोषित छन् !
हामी तथाकथित शिक्षित, सम्पन्न ठूलाबडाका श्रीमतीहरूका सोखका लागि सिस्नोका धेरै झाडीहरू नष्ट भए होलान् । हामीलाई खुसी पार्न त्यो अध्यक्षले कतिको पेट काटी खाद्य सामग्री जुटायो होला ! गरिबहरूको आहार हामीले खोस्यौँ । मनमनै मैले यस्तै साचेँ र दुखित भएँ ।
मलाई यसैयसै आत्मग्लानी भयो । हामीलाई सत्कार गरेबापत उसलाई कति हजार फाइदा भयो होला कुन्नी ! अन्जानमा नै हामी त गरिब नारीको रक्षक होइन भक्षक भएछौँ ।
हाम्रो बसभित्र कोही खुसी भई गीत गाइरहेका थिए । कोही मासुको स्वादको बयान गरिरहेका थिए । कोही शुद्ध घ्यू, दूध, सागसब्जी सम्भिmरहेका थिए । कोही मानौँ केही दिनको स्वर्गीय आनन्दको अनुभूति लिई आँखा चिम्ली बसिरहेका थिए । कोही भत्ताको राशीबाट सारी र गहना किन्ने, रेष्टुराँमा खान जाने कुरा गरिरहेका थिए ।
म भने आत्मग्लानीबाट थकित भएको अनुभव गरिरहेकी थिएँ । कहिले घर पुगूँ र यो पीडाबाट मुक्त हुन गहिरो न्रि्रामा डुबूँजस्तो लागिरहेको थियो ।
नारी र पुरूष समानता
लाटोकोसेरोलाई अँध्यारो मन पर्छ
फेरि याद आयो
तीन हाइकु (नयाँ वर्ष)
मीरा मन थापाको गजल संग्रह "माटो, मुटु र मन" बिमोचित
मेरो माया तिमीलाई
अदृश्य मै रमछा ऊ
दर्शक आफैँ बदलिएलान् कि?
राष्ट्रिय गजल (मेरो देश मलाई नै)
रोचक प्रसङ्गहरुको प्रस्तुति
जुन फूल रोजेँ मैले
यति मिठो मुस्कान
मायाले मुलबाटो भुलेछ
हाँसौँ रमाई !